Governemanta Ntsay : Tsy mahafehy na inona na inona -
AccueilSongandinaGovernemanta Ntsay : Tsy mahafehy na inona na inona
Governemanta Ntsay : Tsy mahafehy na inona na inona
02/01/2019 admintriatra Songandina 0
Efa manao fanahy iniana mihitsy, ary tsy vitan’ny manao “masobe tsy mahita” ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, hatramin’ny nipetrahany teo nanomboka ny volana jona 2018.
Tsy misy zava-bitan’ity governemantan’i Ntsay Christian ity tao anatin’izay fito volana izay, afa-tsy ny fikarakarana iny fifidianana Filoham-pirenena, izay hitam-poko, hitam-pirenena fa feno hosoka sy halatra iny. Iny fifidianana iny rahateo no tena fototry ny iraka nampanaovina ity governemanta ity, nefa dia ireny niaraha-mahita ireny ny vokany. Tsy nisy nandeha tamin’ny laoniny akory fa dia samy nanao izay saim-pantany ny rehetra nikirakira izany.
Ny praiminisitra Ntsay Christian mihitsy aza no nampahazo vahana ny fangalarana sy ny hosoka, ary fanodinkodinana ny safidim-bahoaka tamin’iny fifidianana farany teo iny. Tsy vitan’izay fa nanome tosika ny minisitry ny Atitany tamin’ny fangalarana sy fanaovana hosoka tamin’izany. Tetsy an-daniny, ny fanomezana vahana sy fanerena ny CENI tamin’ny fanangonam-bokatra ka nanodinkodinana sy nangalarana ny safidim-bahoaka ho an’ny tombontsoa manokan’ny kandidà iray.
Ankoatra izay, anisan’ny tsy voahaja ihany koa lalàna sy ny lamina misy eto amin’ny firenena. Porofon’izany ny fanitsakitsahana ny Lalàm-panorenana sy ny lalàm-pifidianana tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena iny.
Manamafy ny tsy firaharahiana ihany koa ny tsy fijerena manokana ny sosialim-bahoaka. Ny vidin-tsolika tsy mitsaha-miakatra ary tsy voafehy. Manaraka izany ho azy ny vidim-piainana, izay tena miantraika mivantana amin’ny fiainam-bahoaka, ny tsy fandriam-pahalemana, izay miseholany…
Araka izany, tsy misy voafehin’ny governemanta ny fiainam-pirenena. Misy amin’ireo mpikamban’ny governemanta aza manambara mihitsy fa tsy misy hiraharahian’izy ireo izay fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena, satria ny iraka nampanaovina azy ireo dia iny fifidianana Filoham-pirenena iny ihany.
Ho voasakana sa tsia ny « Conférence souveraine », kasain’ny firaisan’ireo kandidà androany eny amin’ny CCI Ivato. Mandeha mantsy ny feo, fa misy ny fikasan’ny tompon’andraikitra mahefa hanakatona ny trano sy handefa mpitandro filaminana. Ireo ...Tohiny
kaomisionina famoahana ny karatry ny mpanao gazety : Nicolas Rabemananjara no lany ho filoha
Depiote mpitarika grevy : Mandray karama isam-bolana